हाँस्य–व्यङ्ग्य | DreamLandNepal.com
– नरनाथ लुइँटेल समय बदलिइरहेको छ । मान्छे बदलिइरहेको छ । मान्छेको मन बदलिइरहेको छ । थोरै समयमा धेरै कुरा बदलिइरहेको छ । सङ्घार काटेर भित्र छिरिसकेको एक्काइसौँ शताब्दीले अझ धेरै कुरा बदल्नेवाला छ । पुराना र पाका कुराप्रति मान्छेको चाह हुन्न । त्यसैले चाख र चाहना बदलिइरहेको छ । सोच र विचारहरूमा परिवर्तन आइरहेको छ । बदलिनु भनेको बदला लिनु पनि हो, बदलाले रिस फेर्छ । [...]
– नरनाथ लुइँटेल अभूतपूर्व गतिमा लोकतन्त्र चलायमान भैरहेको छ । लोकका पालकहरू लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा निर्लिप्त छन् । आपसमा बेजोडको सहकार्य र सहमति कायम भएको छ । लोकतन्त्रको जगेर्नाका निम्ति सबका सब अहोरात्र खटिरहेका छन् । यस्तो बेलामा निद्राहराम हुनु नाजायज हुँदै होइन । खलनायकी पारामा स्वयम नायकहरू लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति उपद्रोसँग जुटिरहेका छन् । आजकाल यो [...]
-नरनाथ लुइँटेल “नालायक ! लबस्तरो ! आवारा ! तँलाई लाजसरम केही लाग्दैन ? आइन्दा फेरि फोन गरिस् भने…।” छोरीको नाममा आएको फोन पिताजीले उठाउन पुगेछन् । बिचरो फोनप्रेमीले नाजवाफ भएर फोन रिसिभरमा राखिदियो । छोरीलाई बोलाएर उनले हपारे- “क्या हो, तिम्रो चाला ? तिमी क्याम्पस गएर पढ्दैछ्यौ कि आवारा लोफर केटाहरूसँग सङ्गत गर्दैछ्यौ ? यस्तै ताल हो भने तिमी [...]